Musharaxiinta JL oo Qarka u Saaran in ay Iskaga Soo Cararaan Kismaayo+Dhageyso – Radio Simba 95.0 MHZ – Simbanews – Idaacada Simba
Bisha August ee fooda nagu soo heysa waxaa la filayaa in magaalada Kismaayo iyo deegaanada kale uu ka arimiyo maamulka Jubba-land ay ka dhacdo doorashada madaxtinimada dowladd goboleedka Jubbaland.
Musharrixiin fara badan oo qaarkood ay ka yimideen dibadda ayaa isku soo sharaxay qabashada xilka madaxtinimo ee dowladd Goboleedka Jubbaland, balse waxa ay la kulmaan cadaadis ka dhan ah soo gudbinta afkaartooda siyaasadeed.
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islam Madoobe oo tan iyo sanadkii 2013 hayey xilkan ayaa u muuqda mid aan raali ka aheyn qabsoomidda doorashada waxa uuna doonaya sida ay sheegeen qaar kamid musharixiinta inuu muddo kororsi sameeyo.
Qaar kamid musharixiinta u taagan qabashada xilka madaxtinimo ee Jubbaland ayaa shir jaraa’id ku qabtay magaaladda Kismaayo waxa ayna ka hadleen dhibaatooyinka uu ku hayo Axmed Madoobe.
Shiikh daahir axmed Cabdulaahi oo kamid ah musharaxiinta shirka jaraa’id qabatay ayaa sheegay in axmed madoobe uu cadaadis ku hayo mushraxiinta waxa uuna intaas sii raaciyey in Axmed Madoobe uusan ogoleyn in lala tartamo.
Musharraxan ayaa ugu baaqay Axmed Madoobe in uu muujiyo dulqaad sida isaga loola shaqeyeyna uu ula shaqeeyo musharixiinta kale haddii ay kaga guuleystaan.
Dhanka amniga ayuu sheegay in masharixiintu aysan waxba u dhibeyn taa beddelkeed waxa uu tilmaamay in Axmed Madoobe looga baahan yahay in uusan isaga abuurin qal qal amni.
Dhawaan ciidamo ka amar qaato madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe ayaa garoonka diyaaradaha magaalada kismaayo ku rasaaseeyey musharax Cabdi naasir seeraar iyo ciidamo gaar ah oo uu watay, waxaana taasi ay sii kordhisay cadaadiska ay dareemayaan musharixiinta Jubbaland.